Imidlalo yokufundisa ehamba phambili yeNintendo Switch | Iforamu yeselula
UDaniel Terrasa | 21/06/2022 12:00 | Kubuyekezwe ngomhla ka- 21/06/2022 12:14 | Imidlalo
Izikhathi ziyashintsha, futhi izingane zanamuhla azisadlali emgwaqeni njengakudala. Imidlalo yabo ithuthukiswa endaweni ebonakalayo noma yedijithali, ibe imodi eku-inthanethi ngendlela okumele bahlobane ngayo ngenkathi bezijabulisa. Akungcono noma kubi, kuyiqiniso nje. Ngaphezu kwalokho, eminye imidlalo inganikeza izinzuzo ezinkulu ekuthuthukiseni ingqondo yengane, njengoba eminye ibonisa. Imidlalo yokufundisa ye-Nintendo Shintsha.
Lezi izindlela zokudlala nokuzijabulisa ekhulwini lama-XNUMX, lapho i-e-sports (imidlalo ye-electronic) idlondlobala futhi lapho cishe noma yimuphi umdlalo, wanoma yiluphi uhlobo nendikimba, uphoqa abadlali ukuthi bacabange, ukuthuthukisa amasu nokusebenzisa zonke izinhlobo zamakhono ukuxazulula izinkinga ezivelayo. Kufanele silahle lowo mbono wakudala wokuthi ukudlala phambi kwesikrini "kumosha isikhathi".
Bese kuba khona isigaba esiqondile se imidlalo yokufundisa. Ezinye zihloselwe ukuthuthukisa ukucabanga okunengqondo, ezinye ukuthola isiko elijwayelekile, ikhono lokuhlela nokunquma, noma ukukhulisa amandla engqondo obuchopho babo obusha.
I-Ver también: Imidlalo engcono kakhulu yezingane eku-inthanethi, iphephile futhi yamahhala
Sizokhuluma ngalolu hlobo lokuzijabulisa esihlokweni sanamuhla. Uma ufuna igeyimu ye-Nintendo Shintsha ukuze izingane ezisendlini ziziqeqeshe, zithole ulwazi futhi zithuthukise amakhono obuhlakani ngenkathi uzijabulisa, qhubeka ufunda. Nazi ezinhlanu ezihamba phambili Imidlalo yokufundisa ye-Nintendo Shintsha:
2 Isifanisi sezinyosi
3 I-Big Brain Academy
4 INintendo Labo
5 I-Pikmin 3 Deluxe
Ukuwela Kwezilwane: I-New Horizons ungomunye wemidlalo edume kakhulu kule khonsoli, kanye nemidlalo yokufundisa egqame kakhulu ye-Nintendo Switch, njengoba abantu abaningi bekushaya indiva.
Kulo mdlalo, abancane banomsebenzi wokudala nokuklama isiqhingi sabo. Njengoba behlola izindawo ezintsha, bafunda izinto eziningi ngomhlaba nemvelo ngemidlalo nezinselele. Kule nguqulo entsha, eyethulwe ngo-2020, kugcizelelwa ngokukhethekile ingxenye yemfundo yomdlalo, okuthuthukisa ilukuluku lomdlali kanye namakhono abo okuxhumana nabantu ngendlela enensa neqhubekayo, enobungani nengenayo ingcindezi.
I-Animal Crossing - I-New Horizons nayo yakhelwe ukuthi ukuthi abazali nezingane bangahlanganyela okuhlangenwe nakho, nijabule ndawonye futhi nifunde. Okufanele ohlwini lwethu.
Isixhumanisi: Ukuwela Izilwane - I-New Horizons
Ngo-2019, omunye wemidlalo yokufundisa yeNintendo Switch yasekuqaleni neqanjiwe eyake yabakhona yakhululwa: Bee Simulator. Kulesi siphakamiso, umdlali kumele athathe indima yezinyosi. Ukulingisa lapho kufanele senze khona yonke imisebenzi eyenziwa yilesi sinambuzane esincane nesikhuthele nsuku zonke, sixazulula izinselele, sinqoba ubunzima futhi sigwema zonke izinhlobo zezingozi.
Lo mdlalo usinika ini ngokombono we-didactic? Okokuqala: sondela endaweni yonke ethakazelisayo yezinyosi, izilwane ezimangalisayo umsebenzi wazo ubalulekile ekulinganiseni kwezimiso zemvelo eziningi emhlabeni jikelele. Ngakolunye uhlangothi, izinselele ziletha izinselelo emazingeni ahlukene ezingqondweni zethu. Kufanele ucabange ngaso sonke isikhathi, futhi wazi ukuthi kufanele usabele kanjani ngesikhathi.
Ngakolunye uhlangothi, i-Bee Simulator ngumdlalo lapho inakekelwe yonke imininingwane eyingcaca futhi lapho izinga lokudlala liphawuleka kakhulu. Futhi kuyahlekisa kakhulu, lokho nakho kubalulekile.
Isixhumanisi: Isifanisi sezinyosi
I-Big Brain Academy
Inselele enkulu emqondweni (entsha, kodwa nakubantu abadala): Lo mdlalo odumile unikeza imodi yabadlali abaningi kanye nemodi yomdlali oyedwa. Kule modi, I-Big Brain Academy Kusivumela ukuthi sizijwayeze izimfumbe nezimfumbe, ukuxazulula izindida nezinkinga, futhi ekugcineni, sizihlole.
Ngakolunye uhlangothi, imodi yabadlali abaningi imile umncintiswano ojabulisayo nabangani noma umndeni ukubona ukuthi ubani onengqondo eshesha kakhulu uma kuziwa ekuxazululeni zonke izinhlobo zezinkinga. Ukugqamisa ukuthi kungenzeka yini ukusungula amazinga ahlukene obunzima bomuntu ngamunye kubadlali. Isibonelo, enganeni encane umdlalo ungasethwa kumodi elula, kuyilapho ubunzima bungandiswa kumdlali osemusha noma omdala.
Kafushane, i-Big Brain Academy iyinketho efanelekile njengomdlalo wokufundisa wayo yonke iminyaka yobudala kanye nendlela enhle yokuzijabulisa nomndeni wonke.
Isixhumanisi: I-Big Brain Academy
Omunye wemidlalo yokufundisa ye-Nintendo Switch ebaluleke kakhulu: INintendo Labo. Isipho esiphelele salabo abafana namantombazane abahlale besungula futhi bakhe izinto. 'Ilebhu' kaNintendo izokunikeza amathuluzi owadingayo ukuze uvuselele ubuhlakani bakho futhi uvule amathalente akho.
Ngaphezu kwalokho, lapha okubambekayo kuhlanganiswe ne-virtual. Phakathi kwezinye izakhi, ikhithi ihlanganisa amathoyizi ekhadibhodi amahlanu, izimoto ezimbili zokulawula okude, induku yokudoba ... Uma inqubo yokwakha isiqediwe, umhlaba wangempela kanye nemvelo uyahlangana. Inhloso ye-Nintendo Labo ukuqondisa ingane ekwakhiweni kwezingxenye ezihlukene zegeyimu.
Isixhumanisi: INintendo Labo
I-Pikmin 3 Deluxe
Ekugcineni, sivakashela iplanethi i-PNF-404 kanye nabahloli abancane abathathu. Umsebenzi wethu: thola ukudla. Lesi yisakhiwo somdlalo omuhle IPikmin 3 Deluxe, nayo enobuhle obugcwele ukukhanga.
Umdlali (kunconywa iminyaka engu-10 nangaphezulu) kufanele aphathe i-pikmin, izidalwa ezinjengezitshalo ezizoba usizo olukhulu kubahloli ekufuneni kwabo ukudla. Futhi nokuvikela ekuhlaselweni kwezitha. Izinselele ezivelayo ziphoqa umdlali ukuthi enze njalo cabanga ngobuhlakani kanye nokwenza izinqumo ezifanele ngesikhathi esifushane.
Okunye okuphawulekayo yimodi yeMishini yokudlala nabangani, ekhuthaza abadlali ukuthi basebenzisane futhi basebenze njengeqembu ukufeza zonke izinjongo.
Isixhumanisi: I-Pikmin 3 Deluxe
Isiphetho: I-Nintendo Switch iyinkundla ephelele yokuhlanganisa ukuzijabulisa nemfundo, ibhalansi okungahlali kulula ukuyifinyelela, inqobo nje uma sithola imidlalo elungile ukuze sifinyelele lesi siphetho. Njengabahlanu abakulolu hlu nokunye esibashiye besendleleni.
Indlela ephelele ye-athikili: Iforamu Yeselula » Imidlalo » Imidlalo yokufundisa ehamba phambili yeNintendo Switch